बजेट र बजेट प्रणाली, अनि पुजिबजार स’मस्याग्र’स्त अवस्थामा छ : अर्थमन्त्री शर्मा..? – News21Nepal
बजेट र बजेट प्रणाली, अनि पुजिबजार स’मस्याग्र’स्त अवस्थामा छ : अर्थमन्त्री शर्मा..?
८ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रका संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आर्थिक पुनरूउत्थानमा सार्वजनिक नीजी साझेदारी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
अहिले राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न मुस्किल रहेको शर्माले बताए । भएका चिजको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुलुकका बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त भएको उनको भनाइ छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रसंशायोग्य भएको भन्दै उनले ठूला पुर्वाधार निर्माणमा सरकारसँग मिलेर निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
नाफिजले आफ्नो पहिलो अर्थ वार्षिक स्मारिका विमोचन गरेको छ । कोभिडपछिको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान विषयमा केन्द्रित स्मारिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्मारिकामा कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी र सार्वजनिक भूमिकाबारे दुई दर्जन बढी विषय विज्ञको बिचार समेटिएको नाफिजले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा आर्थिक पत्रकार केशव गौतमलाई नाफिज सम्मानबाट सम्मानित गरिएको थियो ।
Tags: अनि पुजिबजार स'मस्याग्र'स्त अवस्थामा छ : अर्थमन्त्री शर्मा..? बजेट र बजेट प्रणाली
Previous प्रचण्डले भने-: म प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन ! मेरो लागि देउवा जि केही हैन ?
Next एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयमा भीम रावलको फरक मत ! कारण यस्तो ?